Ifektri Yesikhwama Sokudla eChina, Insangu yesikhwama, Isikhwama sephepha, isikhwama esibolayo esibolayo - I-Beyin Packing
Ukupakisha kukaBeyin kungumkhiqizi wesikhwama sokupakisha esikhokhelwayo, sisebenza ngokuklama nokukhiqiza izikhwama zekhofi, izikhwama zensangu, izikhwama zetiye, izikhwama zokudla okulula, izikhwama zamantongomane, izikhwama zezithelo ezomisiwe, izikhwama zokusanhlamvu, izikhwama zokudla kwesilwane, izikhwama ze-powder, izikhwama zesoso, izikhwama zomshini, phindisela izikhwama, izikhwama zefriji, izikhwama ze-spout, izikhwama zamaphepha, iroli yefilimu, njll., izikhwama ezibolayo zibuye zitholakale.
Amasayizi wesikhwama ahlukile kusuka ku-0.5g kuye ku-1lb. Kuningi okulungele ukuthumela amamodeli, njengamakhukhi, i-runtz, umfana we-jungle, i-skittle, ikhekhe lomshado, intambo ye-newds, iphupho eliluhlaza okwesibhakabhaka, njll. Futhi singenza izinhlobo eziningi zesikhwama sokumelana nengane, njenge-pinch N esikhwameni se-slid, isikhwama se-zipper esiphindwe kabili, isikhwama se-slider uziphu, njll. Woza uthole imininingwane ethe xaxa mayelana nokulungele ukuhambisa izikhwama nezikhwama zangokwezifiso!
Isikhwama sekhofi sithandwa kakhulu emhlabeni jikelele, imvamisa kungaba isikhwama esiyisicaba, isikhwama sokuma, isikhwama sohlangothi lwegusset nesikhwama esiphansi esiyisicaba. Okokusebenza, cishe wonke amakhasimende akhetha ucwecwe olufakwe ngaphakathi, kepha amanye afana nokuqedwa kwe-matt kanti amanye athanda ukucwebezela. Okwe-valve, uma umkhiqizo wakho ubhontshisi wekhofi, uzodinga i-valve yendlela eyodwa ukuze uphume umoya, kanti uma umkhiqizo wakho uyi-powder yekhofi, ngokusobala asikho isidingo se-valve.
I-Kraft iphepha lenziwe nge-kraft pulp, imvamisa ilombala onsundu, ukhilimu noma umbala omhlophe. Iyaguquguquka futhi inamandla, inokumelana okukhulu nokuqhuma, ingamelana nokungezwani okukhulu nengcindezi, iyinto enhle yokupakisha. Ngaphezu kwalokho, ngoba iphepha le-kraft linobungane futhi liyakwazi ukuphinda lisetshenziswe kabusha, futhi lihle, manje selithandwa kakhulu futhi liyakhuthazwa.
Isikhwama se-Spout sisetshenziselwa kakhulu iziphuzo, amasoso, kanye nokudla kwezingane, njll. Kunosayizi abaningi bezikhwama ze-spout, njenge-50ml, i-100ml, i-150ml, i-250ml, i-500ml, i-1000ml, njll. i-spout evamile noma ukumelana nengcosana kokudla kwengane, akukho uziphu, uziphu ovamile noma uziphu ophindwe kabili.
IKazuo Beyin Paper nePlastic Packing Co, Ltd. eyandulelwa yi-Xiongxian Juren Paper nePlastic Packing Co, Ltd, yasungulwa ngonyaka we-1998 ekuqaleni.Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko, manje ukupakisha kukaBeyin kwakhiwe kwaba umkhiqizo ibhizinisi elikhethekile ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izikhwama zokupakisha zepulasitiki eziguquguqukayo. Amandla wokukhiqiza angafinyelela ku-60million RMB unyaka ngamunye; Ngama-workshops ayi-7 akhiwe ngamasethi angama-50 amadivayisi ahola phambili afakiwe.Kunabantu abangaphezu kwekhulu abasebenza eBeyin ukupakisha, abangama-50 kubo kungochwepheshe abangochwepheshe abaqeqeshiwe abanesitifiketi sokwenza umsebenzi wokuphrinta, ochwepheshe abaphezulu abayi-10 asebevele bethatha imboni yokupakisha iminyaka eyi-10. Abasebenzi abacebile abanolwazi bazanelisa ngokugcwele zonke izidingo zamakhasimende.
Ukupakisha kukaBeyin kukhokhele abasebenzi babo ukwenza ukuhlolwa kwe-nucleic acid
Ukupakisha kukaBeyin kukhokhele abasebenzi babo ukwenza ukuhlolwa kwe-nucleic acid Njengamanje, isimo sokunqanda nokulawula ubhadane esifundazweni sethu sinzima, abantu abaningi bakhetha ukwenza i-nucleic acid ngezindleko zabo ...
Ungasinquma kanjani usayizi wesikhwama sakho sokupakisha esiguquguqukayo?
Ungasinquma kanjani usayizi wesikhwama sakho sokupakisha esivumelana nezimo? Ngibe semkhakheni wokupakisha iminyaka eminingi kangaka, Umbuzo obuzwa njalo kakhulu ukuthi unganquma kanjani ubukhulu besikhwama sami sokupakisha? Ukupakisha kuyinto ebalulekile kuwo wonke umkhiqizo, ngisho ne-im ...
Isipho sokudla okulula sikaKhisimusi sentombazane empeleni nje sishintshe ukupakisha！
Isipho sokudla okulula sikaKhisimusi sentombazane empeleni nje kushintshe ukupakisha！ UKhisimusi uyeza maduze. Lolu akulona kuphela usuku olujabulisa ukufika konyaka omusha, kodwa futhi usuku lapho wonke umuntu enikana izipho komunye nomunye futhi ezwakalisa ukukhathazeka ngokuhlanganyela ...